MACLUUMAADKA CHIPIT DOG TARANKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Chipit Dog Taranka iyo Sawirada
Chihuahua / American Pit Bull Terrier Isku-dhaf ah eeyo
T.J. Chipit-ka oo 11 bilood jira - 'TJ's momma waa Chihuahua aabihiisna waa Bull Bull. Wuxuu ahaa mid dhicis ah maxaa yeelay hooyadiis dhib ayey ku qabatay isaga iyo walaalkiis oo dhintay. Waan ku barbaariyey gurigiisa habeenki ugu horeeyey maxaa yeelay hooyadiis waxay ku jirtaa daawooyinka oo wax fikrad ah kama haysan waxa socda. Isagu waa mid firfircoon, murqo badan, miisaankiisuna waa 30 rodol. Isagu waa ciyaar jecelna dareenka. '
Chipit ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Godka Dibida Maraykanka . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Dixie May the Chihuahua iyo God sanka oo cas qas ey ey - 'Iyadu waa qof caqli badan oo waxay ogaatay sida loo furo xeryaha. Waxay jeceshahay kalluumeysiga iyo jiidashada dagaalka. Eyga ugu difaaca badan ee aan waligay la yeesho kan ugu jecel oo iyadu jeceshahay kalgacalka. '
'Kani waa Chewy Chipit lab oo jira 1 sano. Isagu waa qumman yahay hareeraha eyga iyo xubin qoyska ka mid ah. Waa eey gudaha kujira oo banaanka soo dhigaya. '
Chewy labka Chipit (Chihuahua / Pit Bull mix) da'da 1 sano
Miloh Chipit (Chihuahua / Pit Bull mix) oo midabkeedu yahay birtii yar yar oo 3 bilood jir ah— 'Miloh wuxuu leeyahay dabo dheer, jir dheer, lugaha gaagaaban iyo dhego fiiqan. Wuxuu leeyahay qaab shabeel, oo lagu qasay bunni, madow iyo bunni khafiif ah. Isagu waa nin firfircoon oo ma ciyo badan, waana dhaqso badan yahay waana saaxiibtinimo '
'Miloh waa 50% Bull Bull iyo 50% Chihuahua. Waxaa lagu sawiray 9 usbuuc iyo 8 rodol. Barte aad u dhaqso badan, ayaa xarig lagu tababaray hal maalin. Potty loo tababaray 6 toddobaad. Wuxuu yaqaan sida loo soo qaato, loo fadhiisto loona ruxo. Wuxuu saaxiibtinimo u leeyahay carruurta iyo dhammaan noocyada eeyaha waana dad aad u bulsheed. Ma ciyo oo aad buu u ilmeeyaa. Cunto xumo badan. Jecel inuu salaaxo meel dhow iyo mid shaqsiyeed. Ma liqo ama naaska Ey dabaq ah. Isagu sifiican ayuu u shaqeeyaa Dabeecad weyn. Docile. Waxaan xasaasiyad daran ku qabaa eeyaha waana isku duubi karaa inta aan doono Miloh aniga oo aan lahayn wax calaamado ah. '
Miloh Chipit (50% Pull Bull iyo 50% Chihuahua) oo ah eey ee 9 toddobaad iyo 8 rodol.
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Chipit
Chipit Dog Sawirada Taranka 1
hound basset qas shaybaarka
bar casaan ah oo ku taal eeyaha sanka
yuppy eyda mashiinka lagu daweeyo
isku darka feeder sheybaarka Jarmalka
qamadi walxaha isku dhafka ah ee isku dhafka dahabiga ah
isku dhafka daschund iyo cocker spaniel